I-Hispanics ichithe i-113.9 yezigidigidi zeedola kuhambo lwasekhaya kwi-2019
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-USA ezaphulayo » I-Hispanics ichithe i-113.9 yezigidigidi zeedola kuhambo lwasekhaya kwi-2019
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Ukuqasha imoto • Caribbean • Ukubambisa • Culinary • inkcubeko • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeLuxury • iindaba • abantu • Resorts • Xanduva • Shopping • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Ezona ndawo zintathu ziphezulu zokuya kwiindawo zasekhaya zabahambi baseSpanish ubusuku bonke eCarlifonia (21%), eTexas (15%) naseFlorida (14%). Oku kunxibelelana nala mazwe mathathu kunye nelona nani liphezulu labahlali baseSpain.
Uninzi lwabahambi baseSpain (iipesenti ezingama-85) balindwendwele ilizwe / ummandla welifa labo losapho, nge-15% ibuya ngaphezulu kwakanye ngonyaka kunye ne-22% ibuya minyaka le.
Amashumi amahlanu anesixhenxe eepesenti avumile ukuba kunokwenzeka ukuba batyelele indawo eyamkela iinkcubeko zaseSpain kwaye babhiyozele ushishino lweSpanishi kunye negalelo lenkcubeko.
Ezona ndawo zintathu ziphezulu zokuya kwiindawo zasekhaya zabahambi baseSpanish ubusuku bonke eCarlifonia (21%), eTexas (15%) naseFlorida (14%).
Isifundo esitsha esichaza iimfuno, inkxalabo kunye nokuziphatha kwabahambi baseSpain eMelika sikhutshiwe namhlanje.
Ingxelo ethi "Vistas Latinas: Isifundo esiBalaseleyo kubakhenkethi baseMelika baseSpain" ingxelo, egama layo lithetha isiLatin Iimbono, luphando lokuqala lohambo lokujonga izimo zengqondo, izimvo kunye neemvakalelo zabahambi abavela kwiqela labemi elikhulayo eUnited States.
IVistas Latinas ikwaluphononongo lokuqala lokuvavanya amandla enkcitho yabahambi baseSpain baseMelika, befumanisa ukuba bachitha i-113.9 yezigidigidi kuhambo lokuzonwabisa lwasekhaya e2019 kwaye babalelwa kwi-13% yalo lonke uhambo lokuzonwabisa lwasekhaya ngaloo nyaka.
Abahambi ngeSpanishi kunye noMmeli
Amanani aseMelika aseSpain ayinyibilikisi yenkcubeko etyebileyo, ke kubalulekile ukuba uqaphele ukuba iingcali zohambo zisebenzise indlela entsha yokwenza uphando ukujonga ukusasazwa kwabantu baseLatino eunited States, kwaye ngenxa yoko zibonelela ngokuqonda okusebenzayo ngokusekwe kwindawo abahlala kuyo abantu baseSpain kunye nalapho banokuhamba khona.
Kwabo bavavanyelwa iVistas Latinas - uninzi lwabo luthi bazalwe eunited States (Iipesenti ezingama-83) kwaye uninzi lubonakalisile ukuba abazali babo bazelwe eMelika Isiqingatha sabaphenduli sichaze ukuba usapho lwabo luvela Mekhsikho, Ngelixa ikota yabaphenduli ekwenziwe uphando kubo ithi bangabo Caribbean ilifa (iPuerto Rican, iDominican okanye iCuba).
Uninzi lwabantu abangama-80% abahamba ngeSpanishi - bakhetha ukuchonga njengeSpanishi, ngelixa ama-25% akhetha iLatino / Latina kunye neepesenti ezi-3 zikhetha igama elithi Latinx (abaphenduli banokukhetha ngaphezu kwexesha elilodwa).
Amashumi amahlanu anesibini eepesenti zabaphenduli bathi banethuba lokundwendwela indawo abaya kuyo ukuba babona ukumelwa kweSpanishi kwintengiso yendawo kunye / okanye kwizixhobo zentengiso.
Abahambi baseSpain basebenzisa ikakhulu zonke iindlela zosasazo ngesiNgesi.